Marihina moa fa amin'ny vanimpotoanan'ny tondradrano toy izao no mahalafo ny anana Raha ny lalanan'ny grevy tokoa dia tokony nampandre ary nanome 72ora vao niroso tamin'ny fitakiana toy izao. Saingy ao anatin'ny secteur informel izy ireo ka tangosana hetra isan'andro. Tsy mahagaga raha ireo mpamory hetra no voky alohan'ny tompony eto amin'ny tanana. Voalaza moa fa fiakaran'ny hetra takiana amin'izy ireo no mahatonga izao. Vao sambany miakatra aza izany ny hetra amin'ny fangaron-daoka, mbola ho avy ny tena laoka sy ny foto-tsakafo tahaka ny katsaka. Ity voamaina farany izay hanikotrana iveloman'ny tantsaha maro ankoatra ny mangahazo. Noheverina fa ny mpisotro labiera izay vita amin'ny katsaka sy ny sakafom-biby tahaka ny omby vavy be ronono no lasibatra kinanjo ny mponina iray manontolo.